Argagax ayaa ku dhammaanaya Afghanistan iyadoo Kabul ay ku hareereysan yihiin Taliban
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Argagax ayaa ku dhammaanaya Afghanistan iyadoo Kabul ay ku hareereysan yihiin Taliban
Wararka Afgaanistaan • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Madaxweynaha Afghanistan ayaa wada xaajood nabadeed kula jira Taliban
Diyaarad ay leedahay shirkadda Air India ayaa ka soo degaysa gegida diyaaradaha ee Kabul si ay isugu dayaan inay caawiyaan muwaadiniinta kale ee Hindiya si ay uga baxsadaan Argagaxisada Taliban. Diyaaradda ayaa dhulka taal. Haddii ay mar kale dib u kici karto waa bannaan tahay.
Wuu dhammaaday Wada xaajoodyadu waxay gaareen gabagabo macquul ah. Kala -wareejin aan dhiig lahayn oo awood ah ayaa ka socota habaynta hadda jirta.
Warar dheeraad ah ama argagax iyo fowdo ayaa ka imanaya Afqaanistaan ​​marka labaad.
Turkigu ma ilaalin doonaa oo ma maamuli doonaa madaarka Kabul, sida ay sheegtay dowladda Turkiga ama ay u dhaafayaan Daalibaan ??
Taalibaan iyo dowladda Afgaanistaan ​​ayaa wada -hadallo ugu jira 'kala -wareejinta awoodda oo nabdoon', sida ay ku warrameen wakaaladaha wararka
Halkan riix si aad u akhrido sida ay Axaddan xiisaha leh ku dhammaatay iyadoo Dagaalyahannada Taliban ay la wareegeen Kabul iyo Xarunta Madaxtooyada Afgaanistaan
eTurboNews wuxuu dhajinayaa warbixinno kooban iyo qoraalo baraha bulshada 30kii daqiiqo ee la soo dhaafay. Qoraallada lama tafatiro oo waxay sawir xun ka bixiyaan waxa ka socda Afgaanistaan ​​xilligan.
Kabul oo ay weheliso Afghanistan inteeda kale ayaa la saadaalinayaa inay dhici doonto galinka dambe ee maanta oo Axad ah, Ogosto 15, 2021
Maaddaama Mareykanka iyo NATO ay ka guurayaan Afghanistan, ciidanka Taliban ayaa si fudud ula wareegi kara Afghanistan oo dhan. Aaway UN -kii? Ma jiraan?
Waxa aan ku arkay dhawr goobood oo ku xeeran magaalada Kabul: argagax badan ayaa ka dhasha dadka saaran baabuurta gaashaaman oo luminaya shiidkooda, xawaaraha dheereeya, xitaa ilaaladu waxay rasaas ku ridayaan hareeraha waddooyinka si ay u banneeyaan ciriiriga taraafikada. Waqtigan xaadirka ah ma jiraan wax tilmaamaaya Taliban gudaha magaalada. Daalibaan waxay sheegeen inaysan soo geli doonin.
Halgamaa taliban oo u sujuuday Allaha awooda leh (swt) si uu ugu muujiyo mahadnaq/mahadnaq Kabul. #Kabuul #KabuulHasFallen #Taliban pic.twitter.com/wmSCgXXnX2
“Ma xisaabinno sababtoo ah waxaan ka imid Afgaanistaan. Waxaan u dhiman doonnaa si tartiib tartiib ah taariikhda ”Ilmada gabadh Afganistan ah oo aan rajo lahayn oo mustaqbalkeedu sii burburayo markii Taalibaanku ku sii siqayaan waddanka. Qalbigaygu wuxuu u jabaa dumarka Afgaanistaan. Adduunyadu way ku fashilantay. Taariikhda ayaa qori doonta tan.
Tiro dhan 5000 oo askari oo Mareykan ah ayaa loo dirayaa meelaha aadka u kulul qaarkood waxay horeyba u joogeen Kuwait waxaana lagu dhajiyay meelo kale oo ay ka baxaan waxaana dib loogu celinayaa si ay u difaacaan Kabul iwm
Shiinaha ayaa diyaar u ah inuu u aqoonsado Taalibaan inay tahay dowladda Afghanistan.
Taliban gudaha Kabul ayaa beeniyay wararka ay warbaahinta ka qoreen Mullah Baradar Akhund oo u imanaya inuu xukunka la wareego Kabul.
Aynu rajeyno inay mar kale dib u furaan Madaarka Kabul mar dhow. Kabul waa garoon diyaaradeed oo arxan daran oo ka soo degi kara (kulul, sare, buuraley ah), diyaaraduhu waxay noqon doonaan kuwo aad u culus maadaama shidaalka aan la damaanad qaadin, ATC waxay noqon doontaa mid aad u xoog badan oo walwalsan duulimaadyada dheeraadka ah. Xadka badbaadada ayaa aad u caato ah.
War degdeg AH Kabul ayaa hareereeyay Chinooks -ka Mareykanka oo daad -gureynaya dadka sida aan u hadalno.
Canshuur -bixiyeyaasha Mareykanka waxay hoos u dhigeen BILYOON laga yaabo inay tiriliyan ka badan tahay dagaalka Afghanistan kaliya si ay uga baxdo dhawr bilood gudahood ka dib markii ciidamadeenu baxeen.
Markaa ugu dambayn #Kabuul wuxuu ku noqday milkiilayaashii dhabta ahaa. Allaahu Akbar
Caqabadda kaliya ee haysata Taliban ayaa noqon doonta inay kala saarto heerka ugu hooseeya, markii ay xukunka qabsadeen. Taalibaan waxay soo bandhigeen tan dhowr jeer, laakiin waqtiyada nabdoon, edbintaan waxay yeelan doontaa dhaqdhaqaaqyo badan - kaliya maahan inay jiido ama jiido kiciyaha.
Dadka xaqa u leh in ay wax xukumaan ayaa dib u celinaya waxa ay leeyihiin. USA, INDIA, ISRAEL dayrtaaduna waa dhowdahay!
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu diyaar u yahay inuu ka baxsado Afghanistan۔
Dagaalyahannada Daalibaan ayaa “guri -guri u galaya” si ay gabdhaha yaryar ugu ururiyaan si ay ugu noqdaan “addoomo galmo” oo loogu talagalay dagaalyahannada kooxda argagixisada, sida ay wararku sheegayaan.
Waayahay! Tom Tugenhadt wuxuu sheeganayaa in UK ay ka codsatay xulafadeena reer galbeedka & Midowga Yurub taageero dheeri ah Afghanistan ka dib bixitaankii nacaybka ahaa ee Biden, ma jirto cid kor u qaadday: aaway cinwaannada !!!!
Farriinta Itoobiyaanku waa mid fudud- Annagu qaran ahaan shalay maanu dhalan. Ma doonayno inaan noqono Liibiya kale, Yemen ama Afghanistan. Waxqabadyada bani'aadamnimada ayaa aad uga fog waxaad sheegato inay yihiin.
Ilo wareedyo gudaha ah ayaa soo jeedinaya in hoggaamiyeyaasha Daalibaan ay isku dayayaan inay afduubtaan oo ay si khasab ah ku guursadaan haweenka ka dib markii hoggaamiyeyaasha maxalliga ah ee Afghanistan laga codsaday inay soo bandhigaan liis ay ku qoran yihiin 12 ilaa 45 jir bishii hore.
#Taliban waxay ka waantoobi kartaa gardarada inta lagu jiro waqtigan muhiimka ah, dabacsanaan badan ayaa la filan karaa marka ay u baahan yihiin sharcinimo caalami ah si loo helo dawlad cusub oo waarta.
Afghanistan: Taliban oo gudaha u gashay Kabul - sida ay dawladda Afqaanistaan ​​u ballan qaadayso in awoodda si nabad ah loogu wareejin doono | Wararka Caalamka | Wararka Sky
Waa wax fiican in la ogaado sida Kabul soo dhacda, safaaraddeennu way gubanaysaa, helikobtarro ayaa loo baahan yahay si loo daad -gureeyo dadkeenna.
Diyaaradda Air India oo ka soo degaysa Kabul si ay uga daadgureyso Muwaadiniinta Hindiya. Ma gaari doonaan?
Madaxweyne Ghani ayaa maanta iscasilaya. Mulla Abdul Ghani Baradar, hogaamiyaha Taliban iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Imaaraatka Islaamiga, si uu si ku meel gaar ah ugu qabto #Afganistan qasriga madaxtooyada, #Kabuul.
Ilo -wareedyada qaarkood ayaa sheegaya in Taliban aysan weerari doonin Kabul, maadaama kala -guurka dowladda uu socdo. #Afghanistan gubashada
Diyaaradda Air India A320. Hadda u soo degaya #Kabuul
Dhowr maalmood ka dib Mareykanka ayaa saadaaliyay dhicitaanka Kabul 90 maalmood gudahood. Ciidankan Rangeela Ghani xitaa iskama celin karin 90 saacadood.
Dowladda Afgaanistaan, afyo waaweyn laakiin geesinimo iyo sharaf la'aan. Halkii ay ugu halgami lahaayeen dalkooda hooyo, waxay u ordayaan magangalyo Xaqiiqdii marna ma ahayn dalkoodii hooyo, dowladdaas waxaa abuuray USA, ma ahayn dowlad Afgan dhab ah.
Dagaalyahanada Daalibaan ayaa gudaha u galay duleedka caasimada Afghanistan ee Kabul kadib markii ay dagaal la’aan kula wareegeen magaalada Jalalabad, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi.
Muuqaalo aan caadi ahayn @AJEnglish.
Helicopterro qulqulaya oo joogto ah oo soo socda kana baxaya #US safaaradda.
Dayrta #Kabuul waxaa laga yaabaa inay hadda dhacdo. Warbixinno badan #Taliban canaasiirta magaalada, laakiin sidoo kale hogaaminta ereyga ayaa ku amartay dagaalyahanada inay joojiyaan soohdinta magaalada.# Afgaanistaan pic.twitter.com/oLFUvhKek8
Mareykanka ayaa ugu horreeya haddii aysan Pakistan iyo Shiinaha aqbalin dowladda Taalibaan. Bulshada ragga u badan ayaa kaalin weyn ka qaatay in Taliban ay dib u qabsato Afgaanistaan ​​iyada oo aan dagaal dhicin. Waligaa ha rumaysan waxay sheegaan iyo siday u dhaqmaan. Shareecada in Kabul hadda!
Daalibaan oo talaabo u jirta qabsashada Afgaanistaan
RIP Militariga Afghanistan !! Ilaahay ha badbaadiyo muwaadinka aan waxba galabsan